Labsa Maree 2011
Guyyota sadiif magaala Frankfurt, Jarmanii, keessatti barmoota fi maree gaggessineen rakkinoota hawaasummaa, diingadee, siyaasaa fi aadaa dubartoota Oromoo irra jiru irratti bal´inaan haasofnee hubbannoota bal’aa irra geenyee jirra. Qabsoon Dubartooti Oromoo hacuuccaa hawaasummaa, cunqursaa polotikaa fi saaminsaa diinagdee jalaa bahuudhaan mirga isaanii gonfachuuf deemsisanu fi kan ummatni Oromoo biyya ofii irratti abbaa biyyummaa isaa deebifatee hiree ofii murteeffachuuf deemsisaa jiru wal irraa adda bahee hin ilaalamu.
Qabsoo Sabaa fi bilisummaa ummataa walii gala dhugoomsuuf ammoo qoodnii dubartootaa murtessaa ta’uun falmsiisaa miti. Haga ammaatti garuu, jaarmiyoota Saba keenyaa kessatti qoodnii isaan taphachuu malan quufsaa ta’uu dhabuunii fi keessattuu hogganaa qabsoo keessatti bakka dhabuun isaanii hir’inaa guddaa ta’uu caalaa qabsoo ummata keenyaa hedduu hubee argama.
*Maree*Dubartoota*Oromoo* Addunyaa* Adoolessa 24. 2011